Chii chinonzi Kugamuchira Webhu Dhizaini? RWD
Chipiri, April 28, 2020 Mugovera, Kukadzi 27, 2021 Douglas Karr
Zvinotorwa makore gumi inopindura webhu dhizaini (RWD) kuenda mainstream kubvira Cameron Adams akatanga kuunzwa pfungwa. Pfungwa iyi yaive nehunyanzvi - sei isu tisingakwanise kugadzira masayiti anoenderana nechitarisiko cheichi chishandiso chairi kutariswa?
Chii chinonzi Kugamuchira Dhizaini?
Inopindura webhu dhizaini (RWD) ndeyewebhu dhizaini nzira yakanangana nekugadzira nzvimbo kuti ipe chiitiko chakaringana chekuona - kuverenga kuri nyore uye kufamba-famba uine hushoma hwekugarisa saizi, kuvheneka, uye kupururudza-pamhando dzakasiyana siyana dzemidziyo (kubva panharembozha kuenda kudesktop komputa. vatariri). Saiti yakagadzirirwa neRWD inochinjisa dhizaini kune yekutarisa nharaunda uchishandisa fluid, yakaenzana-yakavakirwa grid, inoshanduka mifananidzo, uye CSS3 midhiya mibvunzo, kuwedzera kwe @media mutemo.
Mune mamwe mazwi, zvinhu zvakaita semifananidzo zvinogona kugadziridzwa pamwe nekurongedzwa kwezvinhu izvo. Heino vhidhiyo inotsanangura kuti chii chinoteerera dhizaini uye kuti nei kambani yako ichifanira kunge ichiishandisa. Isu tichangobva kuvandudza iyo Highbridge saiti kuti ive inoteerera uye ikozvino iri kushanda Martech Zone kuita zvakafanana!
Maitiro ekuvaka saiti inoteerera anotinetsa sezvo iwe uchifanira kuve nehurongwa hwehutongi kumatayera ako akarongeka zvinoenderana nesaizi yetepoti.
Mabhurawuza anozviziva iwo saizi yavo, saka vanoisa iwo masitayiti kubva kumusoro kusvika pasi, vachitsvaga mataera anoshanda ehukuru hwechidzitiro. Izvi hazvireve kuti iwe unofanirwa kugadzira akasiyana masheetti ehukuru hwese skrini, iwe unongofanirwa kuchinjisa zvinhu zvinodiwa.
Kushanda nefoni-yekutanga kufunga ndiyo yekutanga hwaro nhasi. Yakanakisa-mu-kirasi zvigadzirwa zviri kufunga kwete chete nezvekuti yavo saiti ndeye mobile-inoshamwaridzika asi nezve izere yevatengi ruzivo.
Heino infographic kubva kuMonetate inoratidzira izvo zvingabatsire zvekugadzira imwe inoteerera dhizaini yezvakawanda zvishandiso:
Kana iwe uchida kuona inoteerera saiti irikuita, nongedza yako Google Chrome browser (ndinotenda Firefox ine chinhu chimwe chete) ku Highbridge. Zvino sarudza Wona> Mushambadzi> Maturu Ekuvandudza kubva kumenu. Izvi zvinotakura boka rezvishandiso pazasi pebrowser. Dzvanya pane diki nharembozha icon kuruboshwe kuruboshwe rweMathuluzi Ekushandisa menyu
Unogona kushandisa sarudzo dzekumusoro kumusoro kuti uchinje maonero kubva pamamiriro ekunze kuenda kumifananidzo, kana kutosarudza chero nhamba yeakafanogadzirirwa saiti yekutarisa. Iwe ungatofanira kurodha zvakare iro peji, asi ndicho chinotonhorera chishandiso pasi rese kuitira kuongorora ako anodavirira marongero uye kuona yako saiti inotaridzika kunge akanaka pane ese madhizaini!
Tags: Cameron adamsanotsanangura videonhare inopindura webhusaitiwirirana pataniinopindura dhizaini infographicinoteerera infographicinoteerera nhare dhizainiinopindura webhu dhizainirwdchii chinogamuchira dhizainichii chinoteerera webhu dhizainirwd chii
May 31, 2015 pa 1: 13 PM
Webhu dhizaini haisiri sarudzo yewebhu webmasters, zvava kusungirwa kwavari. Tinokutendai nekugovera ruzivo urwu.
Jun 2, 2021 na6:04 AM
Ndatenda zvikuru Douglas nechinyorwa ichi chakatsanangurwa zvakanaka. Ini ndinofanira kubvumirana neizvi kunyange pane zviri mukati mezvinhu. Kune mazhinji emasaiti isu tinogadzira inoteerera marongero haazove akakwana. Tinoda zvinyorwa zvinopindura. Asi kune mamwe mawebhusaiti ekutanga isu ticha shandisa yako yakanyorwa chinyorwa mabatiro eizvi!
Jun 2, 2021 pa 12: 42 PM
Ndinofunga kuti wakarurama, Aaron. Hazvina kukwana kungoisa saizi uye kufambisa zvinhu… isu tinoda chaizvo kushandisa zvirimo nemazvo zvakare.